 » hardware » လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို
UZK101 စီးရီး Long ကအဝေးသင်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Wiegand Reader ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို Long Distance Parking lot UHF Reader, Long Distance Parking lot UHF Wiegand Reader, Long Distance UHF Tag Reader, Long Ronge UHF Card Wiegand Reader, Parking lot Long Distance UHF Tag Reader, UHF Long Ronge Tag Wiegand Reader, UZK101 စီးရီး Long ကအဝေးသင်လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Wiegand Reader ကို, UZK101 Series Long Distance UHF Wiegand Reader
ပုံစံ: UZK101 seaies
အလုပ်လုပ်ကြိမ်နှုန်း：US 902MHz-928MHz/European 865MHz-868MHz, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်
အလုပ်လုပ်ကြိမ်နှုန်း：902MHz-928MHz / 865MHz-868MHz, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်
interface ပရိုတိုကော：EPC ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အတန်းအစား 1Gen2/ က ISO 18000-6C
Reading အကွာအဝေး：အထိ6မီတာ (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)/အထိ 12 မီတာ (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ：Wiegand 26(ပျက်ကွက်)/Wiegand 34, ယူအက်စ်ဘီ
အလုပ်အဖွဲ့ဗို့အား：9~ 12V DC က
အကွိမျမြားစှာ tags များဖော်ထုတ်ခြင်း：<100 အပိုင်းပိုင်း
R / W ကို mode ကို: သာဖတ်ရန်
အလုပ်လုပ် mode ကို：အမြဲတမ်းဖတ်ပါ(ပျက်ကွက်)/ခလုတ်ဖတ်
I / O Interface：ပြင်ပခလုတ်ထောက်ခံပါသည်
အများဆုံးပါဝါစားသုံးမှု：<3W က (RF output ကို 26dBm, မျိုးစုံ tags များ), <2W က (RF output ကို 26dBm, အတိုကောက် tags များ)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်：-20ကို C ~ + 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ
အတိုင်းအတာ：260260 × 65mm / 445 × 445 × 70mm ×
antenna Panel ကို: ကို ABS အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပလတ်စတစ်များ; နောက်ကျောဖုံး: အလူမီနီရှဲလ်
The product uses the industry's most cost-effective UHF card reader chip, and the part of swing card adopts the module integrated design, making the product to meet the technical requirements of the parking lot. Meanwhile, the utility model has the advantages of stable reading performance, ကောင်းသောကိုက်ညီမှု, low working current and temperature, long service life, and small external influence, and the product adopts the waterproof outer shell design.
Read range up to 12 မီတာ (သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော)
Two working mode: ခလုတ်ဖတ် & အမြဲတမ်းဖတ်ပါ(ပျက်ကွက်)
Maximum Cable Distance: 100မီတာ
prev: မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း OTG Micro နဲ့လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Barrier-အခမဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာညီလာခံတက်ရောက် Channel ကိုဂိတ်ဖြေရှင်းချက်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Barrier-အခမဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာညီလာခံတက်ရောက် Channel ကိုဂိတ်ဖြေရှင်းချက်
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း OTG Micro နဲ့လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို
Long ကလက်ကိုင်နှင့်အတူလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Long-range ကိုမဲရေတွက် Reader ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Handheld သိုလှောင်ဘလူးတုသ် Reader ကို, Dustproof နှင့်ရေစိုခံ
RFID Card ကို (136)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (55)
anti-သတ္တု Tag ကို (18)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (9)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (16)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (16)
module / အင်တင်နာ (17)